လေးစားပါတယ် သမီးရယ် – Tameelay
လက်မထပ်ရသေးတဲ့အပျို တစ်ယောက်ကို ပိန်တာ ၀တာမှစလို့အိမ်ပြန်နောက်ကျချိန်အဆုံး “ဘာလုပ်နေမှန်းမှမသိတာ”ဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးတည်းနဲ့ … ။ စေ့စပ်ထားပြီး(သို့မဟုတ်)ချစ်သူရှိတဲ့ မိန်းကလေးကိုဆိုရင်လည်း”ဒီလောက်ကြာတာမယူကြာသေးဘူး၊” “အပျော်ကြံခံနေရတာလားမသိဘူး”အစရှိသဖြင့်စကားလုံးတွေနဲ့ …။ ချစ်သူနဲ့ ပြတ်သွားတဲ့ အချိန် ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်ဂရုစိုက် လာတဲ့ အချိန် အရာရာကို ရင်ဆိုင်မယ် ဆိုပြီး ခေါင်းမော့လိုက်တဲ့ အချိန် “အေးလေ ဘာဖြစ်ခဲ့လို့ …
ကောင်မလေးတွေ တစ်လတစ်ခါ ဘာလို့စိတ်တိုတာလဲ?
ကျွန်မတို့ မိန်းကလေးတွေ အများစုဟာ ဓမ္မတာ အတောအတွင်းမှာ စိတ်တိုတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ မသိတဲ့သူတွေက သွားပြီး စကားပြောမိတာတို့ ပတ်သက်မိတာတို့ လုပ်မိတဲ့အခါ ဘုတော,တောခံရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ သိနိုင်စေသလဲ ဆိုရင် အောက်ပါ အခြေအနေ (9) ရပ်မှာ အမျိုးသမီးတွေ ရာသီလာနေတယ်ဆိုတာ သိသာစေပါတယ်။ 1. …